Global Voices teny Malagasy » Mihabetsaka ny isan’ny hetsi-panoherana ao Rosia, hoy ny navoakan’ny fanadihadiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Novambra 2015 5:00 GMT 1	 · Mpanoratra Tetyana Lokot Nandika Naomy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Lasa mampiaka-peo kokoa amin'ny fanakianan'izy ireo ny manampahefana ny Rosiana, araka ny hitan'ny fikarohana fanarahamaso  nataon'ny Vaomieran'ny Tetikasa Sivika. Nandritra ny tapany voalohan'ny taona 2015 (1 Janoary hatramin'ny 1 Jona), niakatra efa ho 15 isan-jato ny fihetsiketsehana ankapobeny tao Rosia voarakitry ny manam-pahaizana raha oharina tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2014.
Alexey Titkov, zokiolona mpikaroka ao amin'ny Sekoly Ambony Momba ny Toekarena sy iray amin'ireo mpanoratra ny tatitra fanaraha-maso, no niteny  tamin'ny sampam-baovao RBC fa tarehimarika akaikikaiky ihany ny fiakarana 15 isanjato. “Tsy mitovy amin'ny fanisantsika ny isan'ny olona mandray anjara isaky ny misy hetsi-panoherana io” hoy Titkov. “Ny fitomboana eo amin'ny isan'ny fihetsiketsehana dia midika fotsiny hoe tamin'ity taona ity dia nahitana fitomboan'isa ny hetsika fanoherana ary miteny ny tsy fahafaliany kokoa amin'ireo olana ny olona ary mitabataba kokoa momba izany. Nampiana tao anatin'ny fomba fanadihadianay ireo tondro roa ireo. “
Any amin'ny faritra rosiana maro dia tsy misy ny fahazaran'ny daholobe hihetsika amin'ny tsy fahafaliana na tsy fahafaham-po amin'ny politika sosialy, araka ny hevitr'ilay mpahay siansa politika antsoina hoe Aleksandr Kynev, izay mpiara-manoratra ihany koa amin'ilay fanadihadiana. Fa ny ataony kosa, hoy i Kynev tamin'nyd RBC , dia amin'ny alalan'ny “fandatsaham-batom-panoherana” no hanaovany azy rehefa maneho ny tsy fahafaliany amin'ny alalan'ny latsabato ny olompirenena. namintina ny tatitra nataon'ireo mpanroatra fa ny fiakaran'isan'ny hetsi-panoherana dia mitarika ihany koa amin'ny latsabatom-panoherana any amin'ny faritra 38 izay efa miomana hanatontosa fifidianana ao an-toerana amin'ny Desambra 2016. Ary raha mitady hanao tsindry ara-panjakana ny manampahefana ao an-toerana hisakanana fanoherana ao amin'ny mpifidy, dia mety hipiritika hivoaka ho fanoherana an-dalambe izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/06/76326/
 fikarohana fanarahamaso: http://komitetgi.ru/analytics/2563/
 Komitin'ny Fisantaran'Andraikitra Sivika : http://komitetgi.ru